EEDO LIIBIYA LACAG MA GAYSAA!!!? – Qaranimo Online
You are here: Home 2016 February 18 EEDO LIIBIYA LACAG MA GAYSAA!!!?
EEDO LIIBIYA LACAG MA GAYSAA!!!?
Posted on February 18, 2016 by Omar Farah | 0 Comments
Aqristow markaad aragtay Ciwaanka maqalkan, maxaa kugu soo dhacaya, waa Calool xumo iyo Ciil, cawo iyo ayaan daro, u soo hoyatay waalidiinta Somaaliyeed!!!.
Waa subax barqa ah, waxaan joogaa Xawalad ka mid ah xawaladaha Somaaliyeed, waxaan sugayaa in la ii qidmeeyo oo waxaa iga horeeyo macaamiil kale.
Waxaa soo gashay qof dumar ah oo ay kamuuqato MURUGO iyo Wal wal, waxayna leedahay ‘Yaa ii muslina”, waxay istaagay Dariishada laga Bixiyo lacagaha ama laga diro, waxay shaqaalihii ku salaantay ,salaanta Islaamka!, Cidna kama qaadin salaanta, mar kale way ku celisay salaanta, waxayna raacisay hadal ah “maad ila hadashiin”, waxay kor uqaday codkeeda si loo maqlo.
Waxaa u yeeray nin fadhiya Xafiis, waxay gashay Xafiiskii, iyadoo aad u Cabanaysa, waxayna ku tiri “Eedo LIIBIYA LACAG MA U DIRTAAN”?, wiikii ayaa ku yiri maya ee Raadi Xawalad Hebel, waxay tiri xagey ku taal Xawalada aad ii sheegtay? Ninkii masiinin TILMAAN Fiican, mana ahayn nin fahmi kara MURUGADA ka muuqatay waji HOYADAAS Somaaliyeed, waxayna ka soo baxday iyadoo leh yaa igaynaya meesha ay ku taal xawalad hebel, taasi waxay ku tusinaysaa in Hoyaas aysan aqoon u lahayn Magaalada, laakiin ay ka fursan waysay sababta ay liibiya lacag ugu dirayso.
Gabar fadhisay kursi oo aan filayo in ay ka mid ahayd Macaamiisha Xawlada ayaa tiri “edo xawaladee ayaad rabtaa, maxaase kugu dhacay”?, waxayna ku tiri waxaan rabaa xawalad hebel, WIIL BAA LIIBIYA IIGA XIRAN oo waxaa laga iga Rabaa LACAG DEG DEG ah Edo”, Gabadhii ayaa tilmaantay Hooyadii, waxayna aaday Xawaladii kale.
Waxaan iswaydiiyey kaligay, yaa u maciina Hoyadaas, waayo waxaa ka muuqatay DURUUF adag, sida ka muuqatay JIRKEEDA iyo DHARKEEDA, waxay ahayd qof waayeel ah oo aan filayo in aysan shaqaysan Karin, lacagta ay diraysana aysan ahayn lacag yar, waan dareemi karaa in ay dirayso wixii KAYD hore ay haysatay ama laga yaabo in ay EHEL kaalmo ama DEYN way diisato, hadii ay kayd keedi dirto ama Deyn qaadato yaa u maqan, waa su’al mudan in la iswaydiiyo?
Hadaba, Dhibka haysto Hoyadaas ma ku ekaan doonaa Maalintaas, mase waxaa dhici doonto in marar kale loo soo sheego wiilkaagi Lacag kale ayaa laga Rabaa, hadii ay dhacdo in mar kale ay timaado duruuf taas la mid ah Yaa u maqan Hoyaas?
Ugu dambayn, waxaa maqli jiray “nimaad dhashay kuma dhalin”, Hoyaas dhibka ay marayso iyo Murugada ka muuqatay, waxaa kalifay shaqsiyaad Dalaaliin ah oo laga yaabo in ay Tariibiyeen wiilkeeda, waxayna u soo kordhiyeen Hoyaas laba dhib oo kala ah, wal wal ka wiilka xaalada uu ku suganyahay iyo Qarash aysan ka bixi Karin, waana hal kudhigii ahaa “Qadar Alle iyo ku qabatay waa laqaataa”.
Waxaan leeyahay waa in Talaabo adag laga qaadaa kuwa Caruurta iyo waalidkood kala geeya, kuna kalifa waa lidiinta in ay ku jiraan wal wal iyo walaac joogto ah, waayo Cunug aad dhashay oo dhibkiisa laguu soo sheegay waa Hurdo iyo Hoyasho la’aan.
Allow adaa umaqan umadaada ee u maciin, hadaan arimahan aan si deg deg ah wax looga qaban, waalid badan waa ku sii jiri doonaan dhibkan aan la ogayn goor uu dhamaan doono.
Waxaa calool xumo iyo Ciil ah, ubadkii noqon lahaa MUSTAQBALKA berito oo ku dhamaanaya SAXARAHA iyo BADDAHA, cid u maqana aysan jirin, Caruurtan oo aan ogayn intooda badan dhibaatada Qurbaha.
Somalia hugely appreciates Dubai municipality’s solidarity campaign May 1, 2017
2,500 ee tahriibayay oo laga soo bad baadiyay Badda. May 24, 2016
Somalia: Speaker Jawari under Pressure for Stalled Impeachment Motion September 4, 2015
Waxqabadka Dawladda ee isbuucii la soo dhaafay October 1, 2016
Madaxweynaha oo fariin u diray Saraakiishii hore ee ciidanka November 2, 2016
Seven Somali Journalists Wounded in Mogadishu’s Suicide Attack January 25, 2017